Nadwo Cilmiyeedkii 15-aad ee Sannadlaha ahaa oo caawa ka bilaabatay Masjidka Rowda ee Boosaaso[Masawiro]
Boosaaso:-Waxaa caawa oo taariikhdu tahay 15/4/2017 ka bilowday Masjidka weyn ee Al-Rawda Nadwo Cilmiyeedkii 15-aad ee Sannad laha ahayd oo ka dhici jirtay magaalada Boosaaso, Nadwadaan oo ciwaankeedu ahaa gundhigga Islaaxa Ummadda iyo Caqabadaha Hor taagan.
Ka dib markii Aayadaha Quraanka lagu furfurtay, waxaa hadalka qaatay Boqor Burhaan Boqor Muuse oo bogaadiyay Nadwada iyo culumada soo qabanqaabisay, intaa kadib waxa uu boqorku ka hadlay waddanka xaaladda uu ku jiro iyo abaaraha ka jira, oo uu ku tilmaamay in ay abaartan tahay tii ugu darnayd oo abid nasoo marta, waxa uuna tilmaamay in dhibaatadaas looga bixi karo Cabsida Alle iyo ummaddu in ay Ilaaheed u noqoto.
Intaa kadib waxaa si toos ah loo guda galay darsigii koowaad oo ku saabsanaa Sooyaalka Caqlaaniyiinta iyo dhibaatooyinka fikirkaas oo uu soo jeediyay Sh. Fu’aad Maxamuud Xaaj Nuur. Ugu horrayn waxa uu sheekhu qeexay waxa ay yihiin Caqlaaniyiintu, waxa uuna sheegay in lagu tilmaamo ”Koox isu taagtay in ay baddasho Sooyaalka ay ummadi leedahay ” , sidoo kale waxa uu sheegay in lagu tilmaamo “Koox aaminsan in diinta la oggolaysiiyo fikirada ku xooggan adduunka”.
Sidoo kale waxa uu sheekhu sheegay In kooxdaas ay isku dhereriso saxaabada Rasuulka, ayna wax ka sheegto. Sheekhu waxa uu sheegay in caqlaaniyiintu ama cilmaaniyiintu dhammaan afkaartaas iyo kuwo ka badan ay aaminsanyihin. Intaa kadib waxa uu sheekhu aad uga warramay sooyaalka iyo taariikhda caqlaaniyiinta ku abtirsada islaamka iyo raggii soo bilaabay iyo raga hadda ugu caansan sida cadnaan Ibraahim, caqlaaniyiinta soomaaliyeedna ay wax kasoo dheegtaan buugaagtii ay kuwaasi qoreen iyo afkaartii ay qabeen, waxa uuna sheekhu dhalinyarada uga digay afkaarta noocaas ah oo ay faafiyaan mareegta maandoon iyo kuwa lamidka ah.